इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू: तिनीहरू के हुन्, त्यहाँ के छन् र म कसरी एउटा सिर्जना गर्न सक्छु क्रिएटिव अनलाइन
हालसालका वर्षहरूमा इन्स्टाग्राम सबैभन्दा शक्तिशाली सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक बन्न पुगेको छ, त्यस्ता फेसबुक वा ट्विटर जस्ता अरूलाई पछाडि पारेर। छविमा आधारित, यो केवल त्यो द्वारा चित्रित हुँदैन, तर यो पनि इंस्टाग्राम फिल्टरहरू द्वारा, त्यो हो, तहहरू तपाईंले साझेदारी गर्नुभएको छविको मूल डिजाइनहरू सिर्जना गर्न, वा यसलाई सुशोभित गर्न।
तर, इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू के हुन्? त्यहाँ कति छन्? तिनीहरूले कसरी पाउने? के तिनीहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ? यी सबै र बढि हामी ब्लगमा अर्कोको बारेमा कुरा गर्ने छौं।
1 इन्स्टाग्राम फिल्टर के हो?
2 इन्स्टाग्राम फिल्टरहरूका प्रकारहरू
2.1 फिड फिल्टरहरू
2.2 इंस्टाग्राम कथाहरू फिल्टरहरू
3 इंस्टाग्राम फिल्टरहरू र स्टोरी शैलीहरूमा भिन्नता
4 नयाँ इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ
5 र कसरी तपाईंले इन्स्टाग्राममा फिल्टरहरू अपलोड गर्नुहुन्छ?
इन्स्टाग्राम फिल्टर के हो?
हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू परिभाषित गर्न सकिन्छ तहहरूको श्रृंखला जुन तपाईं छविमा सुपरइम्पोज गर्न सकिन्छ जुन तपाईं प्लेटफर्ममा अपलोड गर्नुहुन्छ र यसले यसको रूप परिवर्तन गर्दछ, या त फरक फोटो सिर्जना गर्न, यसको गुणस्तर र रंगहरू सुधार गर्न, वा यो प्रकाशित भएको बेलामा प्रयोगकर्ताहरूको ध्यान खिच्नको लागि।
तिनीहरू अधिक र अधिक प्रयोग भइरहेको छ, र यद्यपि तिनीहरूको प्रयोगको बारेमा विवाद पनि छ, सबै भन्दा माथि किनभने धेरै जसो केसहरूमा प्रयोगकर्ताहरू वास्तविक नभएको छवि प्रस्तुत गरेर "धोकामा" परेका हुन्छन्, तिनीहरू अझै बढिरहेका छन् र यो अनौंठो कुरा हो कि फोटो वेबमा "स्वाभाविक" प्रकाशित छ।
इन्स्टाग्राम फिल्टरहरूका प्रकारहरू
प्रकारको बारेमा, हामीले तपाईंलाई भन्नु पर्दछ कि, धेरैले सोच्दछन् कि त्यहाँ केवल एक मात्र छ, कथासंग सम्बन्धित, वास्तविकतामा दुई प्रकारका हुन्छन्।
जब इन्स्टाग्राम पहिलो पटक जन्मियो, यसको प्रकाशनको तरीका अन्य नेटवर्कहरूमा जस्तै नै थियो, त्यो हो, तपाईं छवि अपलोड गर्नुहुन्छ, पाठ राख्नुहुन्छ र त्यस्तै भयो। त्यो तरीका अझै त्यहाँ छ, र जब तपाईं छवि इंस्टाग्राममा अपलोड गर्नुहुन्छ, पपिंग साथै थप पनि तपाईं यसलाई ठूलो वा सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई फिल्टरहरू राख्न अनुमति दिन्छ, कुन? राम्रो:
हामीले उल्लेख गरेका यी ती हुन् जुन डिफल्टबाट आउँदछ, तर तपाईंले थाँहा पाउनुपर्दछ कि यदि तपाईं अन्त्यमा पुग्नुभयो र व्यवस्थापन गर्न दिनुहुन्छ भने, अझ धेरै फिल्टरहरू देखा पर्नेछन् जुन तपाईं सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ र यसले तपाईंको छविमा विशेष लेयर सिर्जना गर्दछ जुन यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्
इंस्टाग्राम कथाहरू फिल्टरहरू
केहि बर्ष पछि इन्स्टाग्राम कथाहरू देखा पर्‍यो। हामी इन्स्टाग्राम कथाहरू सन्दर्भ गर्दछौं र तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि यीसँग पहिलेका भन्दा बिल्कुलै फरक फिल्टरहरू छन्। तिनीहरू मध्ये धेरै अधिक दृश्य र मूल हो, किनकि तिनीहरू विशेष प्रभावको साथ एक सानो खेल।
यस अवस्थामा, तपाईले फेला पार्न सक्ने निम्न कुराहरू छन्:
बेबी योडा स्टार युद्धहरू
सबै यी फिल्टरहरू तपाइँको औंलालाई बाँया स्क्रिनको अन्त्यबाट स्लाइड गरेर सक्रिय गर्न सकिन्छ (वा दायाँ) मा दायाँ (वा बायाँ), जुन सानो गुब्बारेमा तल देखा पर्दछ, वास्तवमै फिल्टरहरू होइन, तर प्रभावहरू हुन्।
इंस्टाग्राम फिल्टरहरू र स्टोरी शैलीहरूमा भिन्नता
इन्स्टाग्राम कथाहरू भित्र, तल, तपाईंले केही पाउनुहुनेछ सानो गुब्बारेहरू जुन तपाईंले अपलोड गर्नुभएको छवि पूरै परिवर्तन गर्दछ, यो तपाईंको वा कुनै छविको सेल्फी हो। धेरै व्यक्तिहरू यो विश्वासमा भ्रममा छन् कि यी इन्स्टाग्रामका फिल्टरहरू हुन्, जब यो हुँदैन। तिनीहरूलाई शैलीहरू भनिन्छ, र तिनीहरूलाई यो भनिन्छ किनभने तिनीहरू फोटो परिमार्जन गर्न सक्षम छन्, या त तपाईंको अनुहार फरक देखिन्छ, टोपी राख्दै, तपाईंलाई विदेशी बन्नको लागि।
यसको विपरित, फिल्टरहरूले फोटोहरू कसरी देखिन्छन् त्यसमा रंगहरूको साथ खेलिरहेको पक्षहरूको परिमार्जनलाई बुझाउँछ, तर अरू केहि बिना। अर्को शब्दमा, ती सरल र सबैभन्दा क्लासिक हुन् जुन तपाईंले फोटो अपलोड गर्दा (क्लासिक तरिका) वा कथाहरूमा यसको टोन परिवर्तन गर्दा।
नयाँ इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ
अर्को प्रश्न तपाईले आफैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि यदि तपाईले आफ्नै इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, र उत्तर हो हो। वास्तवमा, दुबै शैलीहरू र फिल्टरहरू धेरैको तपाईंसँग उस्तै विचार थियो र उनीहरूको सिर्जना कसरी भाइरल भयो र लाखौं प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई सिर्जना गरेको देखेर यसलाई सुरु गरेका छन्।
यो गर्न, तपाइँसँग प्रोग्रामहरू बनाउन आवश्यक छ तपाइँ तिनीहरूलाई सिर्जना गर्न मद्दत गर्न।
यस हिसाबले, त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर ती सिफारिसहरू निम्न हुन्:
यो एक अनुप्रयोग हो जुन तपाईंलाई तपाईंको छवि परिवर्तन गर्नका लागि धेरै नि: शुल्क फिल्टरहरू (र भुक्तानी पनि) गर्न अवसर प्रदान गर्दछ। ती मध्ये, तपाईंसँग FX फिल्टरहरू छन् (जुन इन्स्टाग्राम जस्तो हो); म्याजिक फिल्टरहरू, तपाईंको छविहरूको साथ धेरै रचनात्मक; कागज फिल्टरहरू; रंग फिल्टरहरू ...
राम्रो कुरा त्यो हो तपाईं तिनीहरूलाई सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसले तपाईंलाई तपाईंको मनपर्नेमा पूर्ण अनुकूलित फिल्टर बनाउँदछ। त्यसोभए तपाईंले भर्खर छवि आफ्नो इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्नुपर्नेछ।
हामी तपाईंलाई VSCO को बारेमा अर्को अवसरमा बताइसकेका छौं, र यससँग भएका सबै सुविधाहरू। डिस्पोज केही नि: शुल्क फिल्टरहरू तर यो अनुप्रयोगको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं आफ्नै सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि तपाईंले गर्नुभयो, तपाईं यसलाई बचत गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी अन्य छविहरूमा यसलाई लागू गर्नुहोस्।
तपाइँ यसलाई तपाइँको पीसी र तपाइँको मोबाइल मा दुबै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो मा तपाईंसँग धेरै छन् नि: शुल्क फिल्टर जुन तपाईं आफ्नो फोटोमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ र परिणाम बचत गर्नुहोस्।
वा तपाईं आफ्नै सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको फोटोहरू पछि अन्य फोटोहरूमा प्रयोग गर्न बचत गर्नुहोस्।
र कसरी तपाईंले इन्स्टाग्राममा फिल्टरहरू अपलोड गर्नुहुन्छ?
सामाजिक नेटवर्कमा इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू प्रकाशित गर्न सक्षम हुन, यो आवश्यक पर्दछ कि तपाईं यी आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस् जुन दुबै फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लागि स्थापित छ। थप रूपमा, तपाई दुबै प्लेटफर्महरूमा सिर्जनाकर्ताको रूपमा दर्ता गर्नुपर्दछ, अन्यथा, तपाईं पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछैन।
वास्तवमा, हाल त्यहाँ २०,००० भन्दा बढी सिर्जनाकर्ताहरू छन् र तिनीहरू बन्द बिटा समूहको हिस्सा हुन्। तर चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईं यो लामो समय सम्म प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ जब सम्म तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम खातालाई व्यक्तिगत फेसबुक खातासँग लि link्क गर्नुहुन्छ र चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् जुन तपाईं स्पार्क एआर स्टुडियोमा बताउनुहुन्छ।
एकचोटी तपाईंले गर्नुभयो, र तिनीहरूले तपाईंलाई स्वीकार गरे, तपाईं इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ:
तपाईंले निर्यात फाईल अपलोड गर्नुपर्नेछ (स्पार्क एआरबाट)।
फिल्टरको नाम भर्नुहोस्, लेखक र यसले के गर्छ।
भिडियो अपलोड गर्नुहोस् जहाँ भिडियो "प्रत्यक्ष" हेर्नका लागि प्रयोग गरिएको छ।
फिल्टरको लागि आइकन अपलोड गर्नुहोस्।
तिनीहरूले तपाईंको सिर्जनाको महत्त्व राख्नेछन्, यदि तिनीहरूले यो राम्रोसँग देखे भने, तिनीहरूले यसलाई राख्नेछन् र तपाईं सबैलाई साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » सामाजिक नेटवर्क » इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू